chandragiri hills limited(chandragiri hills limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउने कार्य पनि सुरु भइसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर खोप लगाइसकेकाहरुलाई चन्द्रागिरी केवलकार यात्रामा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सुविधाका लागि खोप कार्ड टिकट काउन्टरमा पेस गर्नुपर्ने चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले जनाएको छ। कोभिड–१९...
लगानीकर्तालाई चन्द्रागिरीको झट्का, अधिकांश वित्तीय सूचकमा पहिरो
काठमाण्डौ । लगातार सेयर कर्नरिङ गरेर सुनियोजित ढंगले दोश्रो बजारको मूल्य बढाइएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमीटेडको तेश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले लगानीकर्तालाई झड्का दिएको छ । यो कम्पनीको तेश्रो वित्तीय विवरणमा खूद नाफातर्फ पहिरो गएको देखिएको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी, रिजर्ब तथा कोष, संचालन आम्दानी पनि ह्वात्तै घटेको छ । चालु...
चन्द्रागिरी हिल्सको मूल्य घट्न थाल्यो, सोझा लगानीकर्ता फस्ने डर
काठमाण्डौ । अस्वाभाविक रुपमा उकालो लागिरहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर भाउ आज ओरालो लागेको छ। यसले यो पुष्टि गर्छ कि सेयर कर्नरिङ गरी यो कम्पनीको मूल्य उचालेका गिरोहहरुले अब सोझा लगानीकर्ताहरुलाई भिडाउने खेल सुरु गरेका छन्। लगातार ३३ दिन चन्द्रागिरीको मूल्य उचालेर त्यस्ता गिरोहले आजबाट सेयर भिडाउने खेल सुरु गरेका हुन्।...
एकमहिनामै चिन्द्रागिरीको मूल्य झन्डै २०००% ले बढ्यो, स्वभाविक कि अस्वभाविक ?
काठमाण्डौ । नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा सेयर कर्नरिङ गर्ने र मूल्य बढाउने खेल चल्दै आएको छ। यो बजारमा पुरानै रोग हो। यही फोहोरी खेलबाटै कमजोर वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरुको सेयरमूल्य खुलेआम बढाइन्छ। यस्ता कम्पनीहरुको सेयर आपूर्ति निकै कम हुने र त्यसैको फाइदा उठाउँदै गिरोहहरुले सेयर कर्नरिङ गरेर दिन दुईगुणा रात चौगुणाको हिसाबले...
रिटर्न ४% पनि छैन, रिजर्ब नेगेटिभ छ, तर दैनिक पोजिटिभ सर्किट !
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा रु. ४ हुने प्रक्षेपण कम्पनीले नै गरेको सेयरमा लगातार कर्नरिङको खेल भइरहँदा समेत सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन् । चन्द्रागिरी हिल्स लिमीटेडको सेयरमा खुलेआम कर्नरिङ भइरहेको छ, तर यो विषयमा छानबिन गर्ने तदारुकता कसैले पनि देखाएको छैन । बरु, यो कम्पनीको दोश्रो बजार मूल्य...
रु. ४ ईपीएस भएको कम्पनीको मूल्य रु. १२९२, खुलेआम कर्नरिङ
काठमाण्डौ । लगातार २ सातादेखि चन्द्रागिरी हिल्सको सेयरमूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढिरहेको छ। धितोपत्र कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि यो कम्पनीको सेयरमूल्यमा १० प्रतिशतको हाराहारी बढेर पोजेटिभ सर्किट लागेको छ। योसँगै कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार २९२ रुपैयाँ कायम भएको छ। हालै आईपीओ बिक्री दोस्रो बजारमा...
चन्द्रागिरीको मूल्य बढाउने खेल,सोझा फसाउन थापिदैँछ पासो
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा होटल तथा पर्यटन समूहअन्तर्गत सूचीकृत चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड(सीजीएच) कम्पनीका सेयरमा लगानीकर्ताहरु उचालिँदा लगानी जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । भर्खरै आइपीओ निष्कासन भई दोस्रो बजारमा कारोबार भई रहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयरमूल्य दैनिक पोजिटिभ सर्किट लागी उक्त कम्पनीको सेयरमूल्य...
दोस्रो बजारमा आजबाट चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर कारोबार खुल्यो, प्रतिकित्ता कतिमा भयो किनबेच ?
काठमाण्डौ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा आज आइतबारबाट चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर कारोबार नियमित समयमा खुलेको छ। नेप्से तोकेको रेन्जभित्र यो कम्पनी सेयर किनबेच भएसँगै नियमित समयमा कारोबार खुलेको हो। नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता रु. ९६.६९ देखि रु. २९०.०७ रेन्ज तोकेको थियो। जसअनुसार स्पेसल प्रि–ओपन...
चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर ‘अन्य समूह’मा सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर आगामी आइतबारदेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने भएको छ। आज शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जस्थित कार्यालयमा चन्द्रागिरी हिल्सले सेयर सूचीकरण नेप्सेसँग सम्झौता गरेको हो । नेप्सेले यो कम्पनीलाई सीजीएच कोड प्रदान गरेको छ । नेप्सेले चन्द्रागिरी हिल्सलाई अन्य(अदर्स) सेक्टरमा समावेश...
चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर कारोबार आगामी साताबाट हुने, ओपनिङ रेन्ज कति पाउला ?
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर आगामी सातादेखि धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार हुने भएको छ। आज मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जस्थित कार्यालयमा चन्द्रागिरी हिल्स ले सेयर सूचीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चन्द्रागिरीको सेयर पर्सि बिहीबार वा शुक्रबारसम्ममा सेयर सूचीकरण हुने नेप्सेले जनाएको छ। चन्द्रागिरी हिल्सलाई...
कहिले हुँदैछ चन्द्रागिरी र निफ्राको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकरण ?
काठमाण्डौ । भर्खरै आईपीओ निष्कासन गरेका नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। निफ्राका डेपुटी सीईओ भुपेन्द्र पाण्डेले निफ्राको सेयर नेप्सेमा सूचीकरणका लागि सेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आईएमई क्यापिटले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।...
काठमाण्डौ। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले सेयर रजिस्टारसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। उक्त कार्यका लागि आज बिहीबार ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा चन्द्रागिरी हिल्स र ग्लोबल आईएमई क्यापिटलबीच सेयर रजिष्टारसम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतापत्रमा चन्द्रागिरी...
काठमाण्डौ । भर्खरै निष्कासन भएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण हुन केही ढिला हुने भएको छ। हिजोआज प्रायः कम्पनीका आईपीओ बाँडफाँड भएको एक साताभित्रै नेप्सेमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा गत शुक्रबारमात्रै आईपीओ बाँडफाँड भएको चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर...
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी केबलकार चढ्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। हिजो शनिबार एकैदिन लकडाउनपछिकै सबैभन्दा धेरैले चन्द्रागिरी केबलकार चढेका छन्। चन्द्रागिरी हिल्सका एक सञ्चालकका अनुसार हिजो एकैदिन ३ हजार व्यक्तिले चन्द्रागिरी केबलकार चढेका छन्। चन्द्रागिरी हिल्सले हालै स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। तर...
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आइपीओ बाँडफाँडको अन्तिम रिजल्ट सार्वजनिक भएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको मुख्यालयमा शुक्रबार बिहान १० बजे आयोजित एक कार्यक्रमबीच आइपीओ बाँडफाँड गरिएको थियो। आइपीओ बाँडफाँडको अन्तिम रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक भएका हो। चन्द्रागिरी हिल्सले गत पुस २४...